महिलालाई छिटो उत्तेजित पार्नका लागि यी अंग अवश्य सुम्सुमाउनु होला! « Naya Bato
महिलालाई छिटो उत्तेजित पार्नका लागि यी अंग अवश्य सुम्सुमाउनु होला!
सबैजसो पुरुषलाई सँधै कौतुहलता हुन्छ महिलाको शरीरमा कुन अंग कति संवेदनशील होला भनेर । अव भने यो विषयमा प्रश्न सोधिरहनु नपर्ने भएको छ । निक्कै लामो अनुसन्धानपछि शोधकर्ताहरुले महिलाको शरीरका कुन अंगको संवेदनशीलता के भन्ने प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिएका छन् ।
हालै गरिएको एक अध्यनले स्त्रीको शरीरमा कहाँ विस्तारै स्पर्ष गर्ने कहाँ जोडले थिच्ने र कहाँ कम्पन पैदा गर्दा उनीहरुलाई यौनिकरुपमा उत्तेजित पार्न सकिन्छ भन्ने तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।अनुसन्धानका क्रममा महिलाको घाँटीमा हल्का स्पर्स गर्नु निक्कै प्रभावकारी हुने देखियो । कुनै पनि महिलालाई उत्तेजित तुल्याउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय स्तनको टुप्पो अर्थात निप्पल चलाउनु वा स्पर्ष गर्नु रहेको अध्यनकर्ताको निष्कर्ष छ ।
त्यसैगरी यौन क्रिडाको समयमा भने स्त्रीको योनीको बाहिरी माथिल्लो भागमा हुने क्लिटोरिसमा कम्पन पैदा गर्नु सबैभन्दा उत्तम रहेको पाहियो ।